RECEF-fanomanana fifidianana : Tombontsoa ho an’i Madagasikara -
AccueilRaharaham-pirenenaRECEF-fanomanana fifidianana : Tombontsoa ho an’i Madagasikara
Tafiditra indrindra amin’ ny fihomanana sy fanomanana ny fifidianana ny fanatanterahana ny fivoriamben’ ny RECEF (Le Réseau des Compétences Electorales Francophone) eto Antananarivo, izay nanomboka omaly hatramin’ny faha-22 ny volana martsa ho avy izao. Ny fivoriana izay tafiditra amin’ny andininy fahenina, ary tarihin’ ny filohan’ny RECEF ny jeneraly Siaka Sangaré, lohahevitra dinihina kosa ny hoe « ny fanarahana ny dingana amin’ny fifidianana eken’ny rehetra dia manome vahana ny fandraisana anjaran’ny vehivavy sy ireo vitsy an’isa ». Miisa 70 ny mpandray anjara amin’ny fivoriana amin’ ireo firenena mpikambana anatin’ ny RECEF, izay hahitana matihanina amin’ ny lafin’ny fifidianana, ary hifanakalo traikefa ihany koa amin’izany lafiny izany. Nanatrika feno ny fanokafana ny fivoriana ihany koa ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, izay marihina fa sady filohan’ ny fivoriamben’ny frankofonia ihany koa, ary androany moa dia andro natokana ho an’izay andron’ ny firenena miteny frantsay izay.
Anisan’ny asan’ny RECEF moa dia ny hiantoka tanteraka ny fanatanterahana araka ny tokony ho izy ny fifidianana malalaka, atokisana sy mangarahara, izay mpikambana feno moa i Madagasikara amin’ ny alalan’ny Vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana. Noho izany ny traikefa azo sy ny tapaka rehetra mandritra ity fihaonanana sy fivoriana ity dia tombony lehibe iray ho an’ny CENI, izay hiantoka ny fifidianana amin’ity taona ity. Nandritra ny fandraisam-pitenenan’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no nisaorany ny mpikarakara amin’ ny lohahevitra, satria dia mifandraika amin’ny zava-misy aty Madagasikara no dinihina, izay fototry ny fametrahana ihany koa ny demokrasia, ary tamin’izany ihany koa no nanambaran’ny Filoha fa mahatoky ny fandrosoan’ny firenena ny tenany amin’ izany. Nambaran’ny Filoha ihany koa fa misy ny fiaraha-miasan’ ny fanjakana amin’ ny CENI amin’ ny fanatsarana ny tontolon’ ny fanomanana sy fiatrehana ny fifidianana, izay mahakasika indrindra ohatra ny fanatsarana ny lisi-pifidianana.
Tovolahy 17 taona antsoina hoe Firoze Nourbhay, zanaka karana tompon’ny tranombarotra Eden etsy Behoririka no nalaina enin-dahy misaron-tava an-keriny omaly maraina, tokony ho tamin’ny 06 ora. Teny Andranomena no nisehoan’izany. Nirongo basy kalaky miisa telo ...Tohiny